Rose of Sharon: အမိမြေသို့အပြန်( အပိုင်း၁)
Posted by rose of sharon at 10:14 AM
မိုးငွေ့...... August 26, 2011 at 11:57 AM
An Asian Tour Operator August 26, 2011 at 12:18 PM
ဗီယက်နမ်လေကြောင်းလိုင်း က မဆိုးပါဘူးလို့ ပဲ သတင်းထွက်တာ။ စက်ချို့ယွင်းတယ် ဆိုတာကတော့ ကြောက်စရာ ကြီးဗျ။
အနော် August 26, 2011 at 12:19 PM
မမ ကိုရီးယားကားလိုပဲ ကောင်းခန်းရောက်တော့ ဖြတ်ချလိုက်တယ်.. :P
တော်ပါသေးရဲ့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ခွင့်ရနေလို့ အန္တရာယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို သိတယ်.. ဒါပေမဲ့ လန့်သွားတယ် .
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 26, 2011 at 2:16 PM
မမရေ စောင့်မျှော်လျှက်ပါလို့.. ရင်တထိတ်ထိတ်ရှိလှတယ်မမရေ..
ဒီပို့ စ်လေးရေးနေနုိုင်တယ်ဆိုတော့ လောလောဆယ် အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ ဘဲတွေးပြီး ၀မ်းသာမိပါတယ်။
You did art of writing:)My heart leaps up to read sequel.You may be busy just come back.Take your time...
ချစ်ကြည်အေး August 26, 2011 at 3:20 PM
အောင်မလေး မရိုစ့်တို့က ကိုရီးယားကားလို လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ....:)
စူးနွယ်လေး August 26, 2011 at 3:49 PM
Nyi Linn Thit August 26, 2011 at 3:51 PM
ဇတ်လမ်းက အဖွင့်ကတည်းက ဆွဲခေါ်သွားတာပါလား..၊ အိုင်ပက် ချာ့ဂျာ၊ မြန်မာအင်မီဂရေးရှင်း...ဒါတွေကို ဘယ်လိုကြုံမှာလဲ၊ ဒီကြားထဲ စက်ချို့ယွင်းတဲ့ လေယာဉ်ကပါ ဇတ်ရှိန်ကို မြှင့်လိုက်သေးတယ်..၊း) ဆက်ရန် ကို စောင့်နေမယ်ဗျို့...။
ညိမ်းနိုင် August 26, 2011 at 6:11 PM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် မနော်ရေ။
"လေယာဉ်စောင့်နေချိန်မှာမြန်မာသုံးလေးယောက်လောက်တွေ့ပေမဲ့ ကျမတို့သားအမိတွေ မြန်မာစကားပြောနေသံကြားတော့ ကျမတို့နားကထထွက်သွားကြတဲ့အခါ "
facebook Mall World မှာလက်ဆောင်တွေ
အများကြီးပို့ ပေးလိုက်မယ်နော် :)
အပြုံးပန်း August 26, 2011 at 10:07 PM
ဆက်ရန်ကို အတော် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဟန်ကြည် August 27, 2011 at 2:38 AM
မရောက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကိုကြာသွားပါရဲ့...မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလက စာကြွေးတွေကို အချိန်ရမှ အားပါးတရ လာရှင်းပါဦးမယ်...ပြည်တော်ပြန်ခရီးကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်လျှက်ပါ...
လသာည August 28, 2011 at 11:10 AM
မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း ရိုစ်ရယ်၊ ရင်တုန်လိုက်တာ..။
ဘာလို့ အပိုင်း(၁)ကို ဖြတ်လိုက်တာလဲ..။
ပြန်ရေးပြနေတာဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်လို့သာလို့ တွေးလိုက်မယ်နော်။
အိမ်မက်စေရာ August 28, 2011 at 6:59 PM
မဖော မကြာမီလာမည် မျှော်ပေါ့နော်... မျှော်နေပါတယ်..